२०७७ असार ९ मंगलबार
- डा.मनोज ढकाल
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले एक साता अघि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नुभएको विषयलाई कोरोना भाइरससँग जोड्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । बेसार र हाछ्युसँग जोडेर के यो आलोचना ठिक हो त ? आलोचकहरुले मजाकमा भनिरहेका छन् की, केहि अध्ययन गरेर बोलेका छन् ? हो म चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको केहि कुरामा विमति राखेपनि धेरै कुरामा सहमत छु । बेसारको गुण बारेमा ज्ञान ग्रहण गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उडाउनु एकदम गलत हो ।
हाछ्युले गर्दा घाँटी र फोक्सोमा भरिएका फोहोर र किटाणुलाई बाहिर फ्याक्न मद्दत पुरयाँउछ । साथै फोक्सोको शक्ति बढाउँछ । ज्वरो, हाछ्यु आउने, पखाला लाग्ने र उल्टी हुने जस्ता लक्षण शरीरका प्रतिरक्षा प्रणालीको प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । त्यसैले यस्ता लक्षणलाई औषधिको प्रयोगले दबाउने होईन बरु किन भएको थाहा पाएर उपचार गर्न जरुरी छ । आम मानिसलाई चिकित्सा संकट र रोगको संकटको बारेमा थाहा नहुनाले समस्या बढ्दो छ । अग्रेजीमा एउटा भनाई छ,- "Supression leads to suffer" अर्थात दमनले कष्ट निम्त्याउँछ रोग तबबाट सुरु हुन्छ जब हामिले रोगलाई उपचार नगरेर लक्षणलाई दबाउन खोज्छौ ।
बेसार दैनिक ५०० देखि २५०० एमजिसम्म प्रयोग गर्दा फाईदाजनक हुन्छ । बेसार र कोरोनाभाईरसको बारेमा कुरा गरौं। विभिन्न भाईरल रोगमा बेसार उपयोगी भएको कुरा विभिन्न जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ।
(डा मनोज ढकाल, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक हुन )